Qorshaha Aqalka Cad oo shaaca laga qaaday toddobaadkii tagay ayaa ku baaqaya maal-gelin 50 bilyan oo dollar ah oo muddo 10 sano ah lagu sameynayo dhulalka Falastiiniyiinta iyo dalalka Carabta ee deriska la ah.
“Waa wax xitaa aan laga hadlin karin inaan arrintan u eegno si wanaagsan” ayuu Erdogan u sheegay weriyayaasha isaga oo saaran diyaarad uu kaga soo laabanayo shirka G-20 ee dalka Japan, sida laga soo xigtay wargeyska dowladda taageera ee Yeni Safak.
Qorshaha Mareykanka ayaa la sheegay in hadafkiisa uu yahay inuu hal milyan oo shaqooyin ah u abuuro Falastiiniyiinta.
Qorshahan ayaa qeyb ka ah qorshaha maamulka madaxweyne Trump uu ugu talo-galay Falastiin iyo Israel, kaasi oo loogu magac-daray “heshiiska qarniga.”
Maamulka Trump ayaa si kastaba tusmeeyey in qeybta siyaasadda qorshahan - oo la filay in shaaca laga qaado dhammaadka sanadkan - uusan xusi doonin dal Falastiin, isaga oo ka tagaya siyaasad muddo soo jirtay oo Mareykanka uu aaminsanaa.
Maamulka Falastiiniyiinta iyo Kooxda Xamas ayaa labaduba diiday “heshiiska qarniga.”
Erdogan ayaa aad ugu ololeeya qadiyadda Falastiin, wuxuuna si aad ah uga soo horjeestay go’aankii uu Mareykanka safaraadiisa Israel ugu raray magaalada Qudus.